ယူရို-၂၀၂ဝပြိုင်ပွဲမှာ ဘယ်အသင်းက ယူရိုဆုဖလားကြီးကို ကိုင်မြှောက်ခွင့် ရရှိသွားနိုင်မလဲ ? – MySport Myanmar
ယူရို-၂၀၂ဝပြိုင်ပွဲမှာ ဘယ်အသင်းက ယူရိုဆုဖလားကြီးကို ကိုင်မြှောက်ခွင့် ရရှိသွားနိုင်မလဲ ?
ဇွန်လ(၁၁)ရက်နေ့ကနေ စတင်ကျင်းပလာခဲ့တဲ့ ယူရို-၂၀၂ဝပြိုင်ပွဲဟာ အခုဆိုရင် ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့်ထိကို ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်လို့ အခုအချိန်မှာ ဆီမီးဖိုင်နယ်ကို တတ်လှမ်းထားတဲ့ အသင်း(၄)သင်းထဲက ဘယ်အသင်းကများ ယူရိုဆုဖလားကြီးကို ရယူပိုင်ဆိုင်သွားနိုင်မလဲ အရမ်းကို ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ ကောင်းလာခဲ့ရပါတယ်။ ဒါဆို ဆက်လက်ပြီး ဘယ်အသင်းက ဘယ်လောက်အထိကို အောင်မြင်နိုင်မလဲဆိုတာ ဆွေးနွေးကြည့်ရအောင်ခင်ဗျာ။
ရှုံးထွက်မှာ ဂျာမနီ ကွာတားမှာ ယူကရိန်းတို့ကို ဂိုးပြတ်နိုင်ပွဲတွေနဲ့ ကျော်ဖြတ်လာခဲ့တဲ့ အင်္ဂလန်ကတော့ ဆီမီးဖိုင်နယ်နဲ့ တကယ်လို့ ဖိုင်နယ်အထိပါ တတ်လှမ်းခဲ့ရမယ်ဆိုရင် ဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်အထိပါ သူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်း ဝင်ဘလေမှာ ယှဉ်ပြိုင်ရမယ့် အားသာချက် ရှိလို့နေပါတယ်။ အုပ်စုပွဲကနေ ကွာတားအထိ တစ်ပွဲမှကို ပေးဂိုးမရှိသေးတဲ့ အင်္ဂလန်ရဲ့ခံစစ်နဲ့ ဂိုးသမားတို့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် ဟာရီကိန်းနဲ့စတာလင်တို့ ဂိုးမြူးနေခြင်းဟာလည်း အင်္ဂလန်အတွက် ယူရိုပြိုင်ပွဲမှာ တစ်ခါမှ မအောင်မြင်ဖူးသေးဘူးဆိုတဲ့ မှတ်တမ်းဆိုးကို ချေဖျက်နိုင်တဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အင်္ဂလန်ကိုတော့ ဗိုလ်စွဲဖို့ ထိပ်ဆုံးနေရာကနေ ရွေးချယ်ထားချင်ပါတယ်။
နည်းပြမန်စီနီ ကိုင်တွယ်ပြီးနောက်ပိုင်းကတည်းက တတ်ရိပ်တွေ ပြလို့နေတဲ့ အီတလီအသင်းကို ယူရို-၂၀၂၀ မစတင်ခင်တုန်းက ဗိုလ်စွဲဖို့ ရေပန်းစားတဲ့ အသင်းတစ်သင်းအဖြစ်တောင် မသတ်မှတ်ခဲ့ကြပေမယ့် အီတလီကတော့ ယူရို-၂၀၂ဝမှာ အောင်မြင်မှုတစ်ခုကို ရယူသွားနိုင်လောက်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်မျိုးကို ပြသလို့ထားပါတယ်။ အသင်းလိုက် ကစားအား ကောင်းမွန်လှပြီး စိတ်ဓါတ်ပိုင်းမှာလည်း အားကောင်းနေတဲ့ အီတလီဟာ ၁၉၆၈ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ယူရိုဆုဖလားနဲ့ အလှမ်းဝေးနေရမှုကို အဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ ၂ဝဝဝနဲ့ ၂၀၁၂ခုနှစ်တွေမှာ ဒုတိယနေရာနဲ့ပဲ ကျေနပ်ခဲ့ရမှုတွေကို ချေဖျက်နိုင်မယ့် အနေအထားမျိုးအထိပါ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ယူရိုပြိုင်ပွဲမှာ ဂျာမနီနဲ့အတူ ပူးတွဲအအောင်မြင်ဆုံးအသင်းအဖြစ် ရပ်တည်နေသလို (၂)ကြိမ်ဆက်တိုက်လည်း ဆုဖလားရယူခဲ့ဖူးတဲ့ စပိန်က ဒီတစ်ကြိမ်မှာလည်း ဆီမီးဖိုင်နယ်ထိ တတ်လှမ်းလာခဲ့တယ်ဆိုပေမယ့် အသင်းရဲ့ကစားပုံက အားရစရာ အနေအထားမှာ ရှိမနေခဲ့သလို ဆလိုဗက်ကီးယား တစ်သင်းတည်းကိုပဲ မိနစ်(၉၀)အတွင်းမှာ အနိုင်ယူထားခဲ့ပြီး အုပ်စုတွင်း ဆွီဒင်နဲ့ပိုလန်တို့နဲ့ သရေကျခဲ့သလို ခရိုအေးရှားနဲ့ ဆွစ်ဇာလန်တို့ကိုလည်း အချိန်ပိုတွေမှသာ အနိုင်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အခု ဆီမီးမှာ အီတလီနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမယ့်ပွဲစဉ်က စပိန်အတွက် ယူရို-၂၀၂ဝမှာ အောင်မြင်မှုတွေ ရယူနိုင်မလားဆိုတာကို အသေအချာ အစမ်းသပ်ခံရမယ့်ပွဲစဉ် ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
အဲရစ်ဆင်ကိစ္စ နောက်ပိုင်းမှာ ဒိန်းမတ်အသင်းရဲ့ စိတ်ဓါတ်ပိုင်းကို လှုပ်နိုးလိုက်သလို ဖြစ်လာခဲ့ရပြီး အုပ်စုတွင်း ဘယ်ဂျီယံကို အရေးနိမ့်ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်မှာပါ ရလဒ်အရ ရှုံးခဲ့ပေမယ့် ခြေစွမ်းကောင်း ပြနိုင်ခဲ့သလို အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာလည်း တောက်လျှောက်ကို အနိုင်ရထားကာ တိုက်စစ်က (၃)ပွဲအတွင်း သွင်းဂိုး(၁၀)ဂိုးပါ သွင်းယူထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒိန်းမတ်က ယခင်ကလည်း ယူရိုပြိုင်ပွဲရဲ့ ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့်ကို ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် တတ်ရောက်နိုင်ခဲ့တုန်းက ချန်ပီယံဖြစ်တဲ့အထိ စွမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးတာဖြစ်လို့ အခု ဒုတိယအကြိမ် ဆီမီးဖိုင်နယ်ကို ချန်ပီယံ ပြန်ဖြစ်လာနိုင်မလားဆိုတာ စဉ်းစားစရာပါ။ ဒါပေမယ့် သူတို့အသင်းထက် ကစားသမားအင်အား သာလွန်လို့နေတဲ့ အသင်းတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်လို့ ဗိုလ်စွဲမယ့် အခြေအနေက ရာခိုင်နှုန်းနည်းပါးနေနိုင်ပြီး တခြားအသင်းတွေထက် ပိုသာလွန်နေမယ့် သူတို့ရဲ့စိတ်ဓါတ်ခွန်အားကိုသာ စောင့်ကြည့်သွားရပါလိမ့်မယ်။
MySport Myanmar2021-07-05T17:43:13+06:30July 5th, 2021|All Posts, Football, La Liga, Premier League, Serie A, World|